Barcelona Oo Camp Nou Si Xun Ugu Xasuuqday Espanyol, iyo Suárez Oo Laba Gool Dhaliyay,
shiiqa May 8, 2016 No Comments
Barcelona ayaa Camp Nou ku soo dhawaysay kooxda ay dariska yihiin isla markaana ay sida wayn u xifaaltamaan ee Espanyol kulan si wayn loo sugayay isla markaana la sugayay saamaynta uu ku yeelan doono tartanka La Ligaha.
Saddexda kooxood ee La Ligaha ugu sareeya ee Barcelona, Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa isku waqti wada ciyaarayay, waxayna koox kastaaba maanka ku haysay muhiimada kulamada 37 aad ee La Liguhu u leeyihiin.
Dqiiqadii 8aad ayaa Lion Messi dhaliyay free kick. Suares ayaa dhaliyay labada gool daqiiqadihii 52aad 61ad Luis, Rafinha iyo Naymar Jr ayaa iyagana shabaqa soo taabtay.
Cayaartii waxay kusoo idlaatay 5 iyo waxba. Real Madrid ay ilaa maalinta ugu danbaysa u sii ordi doonto koobka La Ligaha kadib markii ay Valencia guul ka gaadhay. Halka kooxda Atletico Madrid ay guuldaro xanuun badan
kala kulantay kooxda Levante oo ay marti u ahaayeen, Fernando Tores ayaa daqiiqadii 2aad atletico goolka u dhaliyay,laakiin daqiiqadii 31aad ayaa kooxda levante waxey heleen goolki barbar dhaca waxaana u dhaliyay Victor Casadesus. Qeybtii hore waxaa lagu kala nastay barbar dhac, dhamaadkii cayaarta daqiiqadii 90aad ayey mar kale kooxda Levante waxey heleen goolki guusha kaas oo ay kaga mahad celinayaan cayaaryahankooda Giuseppe Rossi
Baidoa Media Sport